Enif TV: Zvese Zvaunofanirwa Kuziva | RoidHub
»Enif TV: Zvese zvaunoda Kuti Uzive
Enif TV: Zvese Zvaunofanirwa Kuziva
4.7 / 5 ( 8 mavhoti )
Mutambo wacho senge fomu yehunyanzvi hwekutaura ndeimwe yeanowanzo uye huru sosi yevaraidzo kune vateereri vakuru vepasi. Tiri kutaura pamusoro peEnif TV uye chimwe chinhu chakakodzera kune iyi nzira yevaraidzo.
Vateereri veSouth Asia vane mukono weiyo opera yesipo uye ichi ndicho chikonzero mushure memafirimu, ndiyo terevhizheni yeTV nemaleya anoita iyo inonyanya kuenda-kune fomu yezvinovaraidza.
Ichi ndicho chikonzero indasitiri inokura yeiyi mini-screen varaidzo mudunhu rose inorongedza nhevedzano pane dzakasiyana siyana dzemagariro, tsika, uye dzimwe nyaya.
Pnguva imwechete, munguva ino yekudyidzana kwenyika dzepasi rose. Isu tinoratidzwa pachena kwehunhu hwetsika dzemamwe matunhu. Muchokwadi, munhu wanhasi mubatanidzwa wetsika dzakawanda mazhinji acho ari pachimiro uye mumuviri achibviswa kwaari.
Imwe nzira yakadaro yekuchinja kwetsika ndeyokuwanika kwevaraidzo yezvinhu kubva pasi rese. Pasi rese, pane mashoma mashoma ezvigadzirwa zvemitambo zvinogona kubaya vateereri kubva kumatunhu akasiyana enyika. Mumwe muenzaniso wakadai ndiTurkey Drama Industry.
Chii chinonzi Enif TV
Dzimwe nzira dzeEnif TV
YouTube: TRT Ertugrul nePTV
Urdu / Hind Dramas pane Android Mobile
Iyi yeChannel yeYouTube yakavakirwa muDubai uye ine chinangwa chekuunza iwe zvakanakisa zvirimo kubva kumaindasitiri akasiyana siyana pasirose. Iyi chiteshi yakatangwa kuburitsa zvimwe zvezvakanakisa vhidhiyo yezvinhu zvevatariri muHindi neUrdu.
Izvi zvinosanganisira shanduro dzemafomu makuru ebasa kubva kumatunhu akasiyana siyana eUrdu neye Hindi anoteerera vateereri.
Iwe unogona kuwana izvi chero nguva uye nzvimbo pasina kubhadhara kunyorera kubhadharira kune chiteshi. Saka kana iwe uchitsvaga Urdu kana Hindi inonzi Kurulus Osman Episode kana mudiwa weUrdu / Hindi anonzi Ertugrul Ghazi. Iwe unogona kutarisa izvo zvese muchimiro chesarudzo yako.
Chinhu chakanakisa nezveYouTube ndechekuti iwe unogona kuwana izvo zviri pafoni yako yekufambisa kana panguva imwechete kubatana kune yako Android TV uye uzvitarise pachiratidzo chikuru nemhuri yako neshamwari.
Kunyangwe iwe uri kupera kwevhiki uri kumba kana uchifamba pakati pebasa rako uye kumba. Iwe unogona kubatana neinternet uye wotanga kutarisa kubva kwawakasiya nguva yekupedzisira.
Kunyanya, kana iwe uri kufunga kutanga kutarisa iyo Osman Ghazi Turkish serial. Iyi ndiyo nzira yaunofanirwa kutevera. Iwe unogona kuwana ese episode akateedzeredzwa iwe. Yakabayiwa mumitauro yeHindi neUrdu nemiridzo yakakodzera, hauzopotsa kurohwa pano.
Kana iwe uchishamisika nezvedzimwe nzira dzeiyi Enif TV YouTube chiteshi. Ipapo ramba uchiverenga. Pano tinokupa iyo ruzivo rwezvimwe zvinyorwa kuti unakirwe neTurkey uye zvimwe zvirimo zvakaburitswa muHindi uye Urdu. Iwe unogona kushandisa yako mbozhanhare mbozha, laptop, kana yemunhu komputa kunakidzwa izvi zvinoita mutambi mutambo
Urwu ndirwo bapiro rekuvaraidza rePakistan Television Network. Nhepfenyuro yepamutemo yenyika inopihwa pekutangisa dutu remwaka wemwaka uno nekuunzwa kwaDiliris Ertugrul abviswazve Ertugrul Ghazi.
Iyo inodurura iyo Urdu dubbed vhezheni iyo maHindi vanoona vanogona zvakare kunakidzwa pasina chero chakaoma.
Kana iwe usingade kuona iyo terevhizheni paterevhizheni chero chikonzero. Ikozve kune dzimwe sarudzo dzekuongorora zvakare. Iwe unogona kuenda kune YouTube: TRT Ertugul nePTV.
Iyi ndiyo nzira yepamutemo yekunongedzera zvikamu zveErtugrul mutambo mune iyo inonzi dubbed version. Iwe unogona kutanga kubva chero episode uye kumbomira uye kusiya chero nguva kuti udzoke zvakare.
Dzimwe sarudzo ndedzenharembozha. Kana iwe uine foni mbozha yeApple saka ndidzo nzira dzakanakisa dzeEnif TV.
Ipapo iwe unokwanisa kuisa mashoma anoverengeka ayo anokupa iwe akananga kupinda kune iyo Turkish dubbed serials mumitauro yemuno. Izvi zvinosanganisira Abbasi TV Apk, iFilms App, uye Makki TV.
Iwe unogona kuongorora zvakawanda nezve izvi zvekushandisa uye kurodha faira re APK uine imwechete tap. Ipapo iwe unogona kunakidzwa nemitambo yeTurkey pamafoni efoni kwese kupi chero nguva.
Enif TV ndiyo yazvino yekuwedzera kune iyo online zvinyorwa kubva kwaunogona kunakidzwa nemadhrama uye nezvimwe zvinoratidzwa kubva pasi rese. Pano, idzi episode dzinonzi kwauri muHindi uye Urdu. Zvese zvaunoda kubatana kweinternet uye chishandiso chekuwana chiteshi.
Osman Ghazi muHindi
Osman Ghazi muUrdu
Turkish Dramas pane Android